Akụkọ - Soro na ngosi EPS ọkachamara
N'afọ ndị gara aga, anyị sonyeere ọkachamara EPS igwe ngosi na Jordan, Vietnam, India, Mexico na Turkey wdg Mba. N'iji ohere nke ihe ngosi ahụ, anyị zutere ọtụtụ ndị ahịa ndị zụrụrịrị igwe EPS n'aka anyị ọ bụ ezie na ha anaghị ezute ibe anyị, anyị zutere ndị enyi ọhụrụ ndị nwere atụmatụ iwu osisi EPS ọhụrụ. Site na nkwukọrịta ihu na ihu, anyị nwere ike ịmatakwu ihe ha chọrọ, ka anyị wee meere ha azịza dabara adaba.
N'etiti ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche gara, ihe kacha masị m bụ otu ụlọ ọrụ EPS na India na otu ụlọ ọrụ EPS na Turkey. Factorylọ ọrụ EPS dị na India bụ ụlọ ọrụ ochie. Ha na-azụta ụdị 40-50 nke EPS site n'aka anyị kwa afọ iji mepụta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa dị iche iche. E wezụga nke ahụ, ha zụtara igwe EPS ọhụrụ na akụkụ EPS akụkụ anyị. Anyị anọwo na-arụkọ ọrụ karịa afọ 10 ma wulite ezigbo ọbụbụenyi. Ha tụkwasịrị anyị obi nke ukwuu. Mgbe ha choro ngwaahịa ndị ọzọ site na China, ha na-agwa anyị mgbe niile ka anyị nweta ha. Osisi Turkey ọzọ bụ otu n'ime osisi EPS kasị ochie na nke kasị ukwuu na Turkey. Ha zụtara 13 nkeji EPS Shape Molding Machines, 1 EPS Batch Preexpander na 1 EPS Block Molding Machine n'aka anyị. Ha na - emepụta EPS ịchọ mma, gụnyere EPS ọka, EPS ceil na EPS ịchọ mma edoghi na mpụta mkpuchi. EPS ejiri ọka dị iche iche mee ihe maka ahịrị nkuku ụlọ dị n'ime, a na-eji mbadamba ụlọ EPS mee ihe maka ime ụlọ dị n'ime. A na-akwakọba ihe ịchọ mma ndị a n'usoro ma na-ebupụ ya na mba Europe na Middle-East. Productsfọdụ ngwaahịa na-juru n'ọnụ ke otu ibe ma ọ bụ ole na ole iberibe ọnụ maka retail n'ire. Ọ bụ n'ezie ọmarịcha njem ma anyị nwere obi ụtọ na anyị na ndị ụlọ ọrụ dị otu a rụkọtara ọnụ.
Na 2020, n'ihi nje Corona, anyị ga-akagbu ihe ngosi dị iche iche na-adịghị n'ịntanetị ma gbanwee na nkwukọrịta n'ịntanetị. WHATSAPP, WECHAT, FACEBOOK na-enye anyị ohere ka anyị na ndị ahịa na-ekwukọrịta oge ọ bụla. Ọ bụ ezie na ndị ahịa enweghị ike ịga China ịbịa leta anyị, anyị nwere ike ịme vidiyo ma ọ bụ oku vidiyo iji gosipụta ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. Ozi ọma anyị na-eje dị mgbe niile. N'ezie, anyị nwere olile anya na CORONA ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya, yabụ ndị mmadụ n'ụwa niile nwere ike ịga njem n'enweghị nsogbu na akụnụba nwere ike kpoo ọkụ.
Ihe ngosi 17 # Vietnam International Plastic & Rubber Industry Exhibition
Ihe ngosi nke India 2018
China (Turkey) Azụmaahịa Ahịa 2019 Na Istanbul Expo Center